Sawirka Sawirka: Kendall Rock
The Rivers of Most Endangered America® warbixinta Liiska sare ee Mississippi waxay ku qoran yihiin liiska ugu sarreeya ee 2020 sababtoo ah hanjabaad isku-dhafan oo ah in isbeddelka cimilada iyo webiga liita iyo maareynta biyaha ay u horseedaan nabadgelyada dadweynaha webi ku teedsan.
The Rivers of Most Endangered America® warbixinta waa mid ka mid ah warbixinnada sanadlaha ah ee ugu wanaagsan ee la ogaa oo ku nool dhaqdhaqaaqa deegaanka. Sannad kasta illaa iyo 1984, dabeecadaha ilaaliya webiyada ayaa waxay la wadaagaan Rivers American si ay u isticmaalaan warbixinta si ay u badbaadiyaan wabiyada degaanka, si joogta ah uqeybgalaan guulaha siyaasadeed ee ka faa'iideysanaya wabiyada iyo beelaha ay ku socdaan.
Rivers Rivers waxay dib u eegis ku samaysay magacaabista Rivers Most Endangered Rivers America oo ka timid kooxaha webiyada iyo muwaadiniinta ku nool waddanka. Rivers ayaa lagu xushay iyada oo ku saleysan shuruudaha soo socda:
Go'aanka ugu weyn (in dadwaynuhu gacan ka geysan karaan saamayn) sanadka soo socda ee talaabada la soo jeediyey;
Muhiimadda webiga ee beelaha aadanaha iyo dabiiciga ah;
Baaxadda khatarta ah ee khatarta webiga iyo bulshooyinka la xidhiidha, gaar ahaan iftiinka cimilada isbeddelka
Warbixinta ayaa ku tilmaantay toban wabiyo oo qaddarin la go'aamin doono sannadka soo socda, waxayna ku dhiirri-galinayaan go'aan-qaadayaasha inay sameeyaan wax ku habboon wabiyada iyo beelaha ay taageereen. Waxay soo bandhigaysaa bedelaadaha soo jeedinta kuwaas oo waxyeelayn doona wabiyada, waxay tilmaamayaan kuwa go'aaminaya go'aannada muhiimka ah, waxayna tilmaamayaan fursadaha dadweynaha inay tallaabo ka qaadaan iyaga oo ka wakiil ah waliba webi kasta oo liis ah.
2020 Webiyada ugu khatarta badan Mareykanka® Websaydh
2020 Webiyada ugu khatarta badan Mareykanka® Warbixinta
2019 Nawaaxiyada Inta badan Dhibaatooyinka Ameerikaanka ah® Warbixinta
2018 Rabshadaha ugu Khatarsan ee Ameerikaanka ah® Warbixinta
2017 Rabshadaha ugu Khatarta Badan Mareykanka® Warbixinta
2016 Nayroobi Nololeedka ugu Weyn Mareykanka® Warbixinta